Minecraft Earth 2019.0823.16.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2019.0823.16.0 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း Minecraft Earth
Minecraft Earth ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျဖန်တီးအဖြစ် Minecraft ၏အသစ်တစ်ခုကိုရှုထောင်ရှာဖွေတွေ့ရှိ, စူးစမ်း, နှင့်အစစ်အမှန်ကမ်ဘာပျေါတှငျရှင်သန်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ် spanning လက်သမားတို့နှင့်စူးစမ်းရှာဖွေသူများတစ်အသိုင်းအဝိုင်း join, သင့်တည်ဆောက်ဘို့အရင်းအမြစ်များကိုစုဆောင်း, တိုးပွားအဖြစ်မှန်အတွက်ယာဉ်, ပြီးတော့ဘဝ-အရွယ်အစားမှာသူတို့ကိုထားပါ။ သင်ပင် Mini-Adventures များအတွက်အခြားသူများနှင့်တက်ရှိနေသေးသည်နိုငျပါသညျ!
• tabletop mode မှာအံ့သြဖွယ်ဖန်ဆင်းခြင်းအဆောက်အဦးများနှင့်ဘဝအရွယ်အစားမှာအစစ်အမှန်လောကရှိသူတို့ကိုထားပါ။
•အရွှံ့ဝက်နှင့် moobloom နဲ့တူထူးခြားတဲ့လူအုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ, သင်၏တည်ဆောက် populate မှသူတို့ကိုအသုံးချ!
Minecraft Earth အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Minecraft Earth အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Minecraft Earth အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
i-hope-i-can-change-this-name-in-the-future စတိုး 19 39.9k
Minecraft Earth ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Minecraft Earth အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2019.0823.16.0
Minecraft Earth APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ